महिला : विगतको उत्सव मनाऊ, भविष्यको योजना बनाऊ
काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका बारेमा तपाईंले सुन्‍नुभएकै होला। यस सन्दर्भमा मिडियामा आउने गरेका खबर पनि तपाईंले थाहा पाउनुभएकै होला। तर, यो दिवस किन मनाइन्छ? कहिलेदेखि यसको सुरूआत भयो? महिला दिवसका दिन आयोजना हुने प्रदर्शनहरू कुनै समारोह हुन् कि विरोध? संसारमा महिला दिवसजस्तै पुरुष दिवस पनि मनाइन्छ? अहिले कोरोना छ, यस्तो समय पनि महिला दिवस आयोजना हुन्छ? अधिकांश मानिसमा यी प्रश्नहरू उठिरहेका हुन्छन् र यसको जवाफ दिनु आवश्यक हुन्छ।
कसरी सुरू भयो महिला दिवस?
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको आयोजना एउटा श्रम आन्दोलन थियो। यो संयुक्त राष्ट्र संघले बर्सेनि आयोजना गर्न स्वीकृति दिएको थियो। यो आयोजनाको बिऊ तब रोपियो, जब १९०८ मा न्युयोर्क सहरमा १५ हजार महिलाले कार्यघण्टा कम गर्ने तथा उचित तलब र मतदानको अधिकार माग्दै विरोध प्रदर्शन गरे।
त्यसको एक वर्षपछि अमेरिकी सोसलिस्ट पार्टीले पहिलो पटक राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन सुरू गर्‍यो। तर, त्यस दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने विचार भने क्लारा जेटकिन नामकी एक महिलाको दिमागमा आयो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस पहिलो पटक सन् १९११ मा अस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विजरल्यान्डमा मनाइयो। यसरी २०२१ म ११०औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदै छ।
महिला समाजमा, राजनीतिमा र अर्थशास्त्रमा कहाँसम्म पुगे? महिलामाथि हुने विभेद, असमानताजस्ता सन्दर्भलाई लिएर विरोध प्रदर्शन आयोजना पनि हुने गरेको छ। आज मार्च ८, संसारभर महिला हकहितका विषयमा चर्चा भइरहेको छ, विभिन्‍न किसिमका कार्यक्रम भइरहेका छन्।
त्यसो त आधिकारिक ढंगमा यसलाई मनाउन थालिएको चाहिँ १९७५ देखि हो, संयुक्त राष्ट्र संघले सोही बखतदेखि मनाउन थालेको थियो। संयुक्त राष्ट्रले १९९६ मा पहिलो पटक यसको आयोजना गर्दा नारा तय गर्‍यो- विगतको उत्सव मनाऊ, भविष्यको योजना बनाऊ।
महिला समाजमा, राजनीतिमा र अर्थशास्त्रमा कहाँसम्म पुगे? महिलामाथि हुने विभेद, असमानताजस्ता सन्दर्भलाई लिएर विरोध प्रदर्शन आयोजना पनि हुने गरेको छ। आज मार्च ८, संसारभर महिला हकहितका विषयमा चर्चा भइरहेको छ, विभिन्‍न किसिमका कार्यक्रम भइरहेका छन्। क्लाराले जब अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको विचार प्रस्तुत गरिन्, तब उनले कुनै निश्‍चित दिन तोकेकी थिइनन्। १९१७ सम्म त कुन दिन अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने भन्‍ने निश्‍चित थिएन।
१९१७ मा रुसका महिलाले खाना र शान्तिको माग गदै चार दिने विरोध प्रदर्शन आयोजना गरे। तत्कालीन रुसी जारले सत्ता छाड्नुपर्‍यो र अन्तरिम सरकारले महिलालाई मतदानको अधिकार दियो। रुसमा महिलाले विरोध प्रदर्शन गरेकै दिनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको तिथि स्पष्ट हुन गयो र मार्च ८ तय भयो।
महिलाका तीन रंग
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको रंग बैजनी, हरिया र सेता रहेको छ। बैजनी न्याय र गरिमाको सूचक हो। हरियोचाहिँ अपेक्षाको र सेतो रंग शुद्धताको सूचक हो।
अमेरिकामा मार्चलाई पूरै महिला इतिहासको महिनाका रूपमा लिइन्छ। आजका दिन समाज तथा राष्ट्रमा महिलाले दिएको योगदानलाई स्मरण गर्दै सम्मान गरिन्छ। यस पटक संसारभर कोरोनाको कहर छ, त्यही कारण भर्चुअल कार्यक्रममा जोड दिइएको छ।
चुज टु च्यालेन्ज
यस पटकको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको नारा ‘चुज टु च्यालेन्ज’ अर्थात् चुनौतीको छनौट गर्नुहोस् रहेको छ। यो नारा तय गरिनुको प्रमुख कारण परिवर्तित संसार चुनौतीपूर्ण रहेकाले हामी व्यक्तिगत ढंगमा त्यसको छनौट गर्न र विचार गर्न जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्‍ने हो।
महिला दिवसको अभियानमा भनिएको छ- ‘हामी सबैखाले लैंगिक भेदभाव तथा असमानतालाई चुनौती दिन सक्छौं। हामी सबै महिलाको उपलब्धिका सन्दर्भमा उत्सव मनाउन सक्छौं। सामूहिक रूपमा, हामी सबै एक समावेशी संसार बनाउन योगदान गर्न सक्छौं।’
२०१७ मा सुरू भएको ‘मी टु’ आन्दोलनको असर अहिले देखिन थालेको छ। यस्ता आन्दोलनले महिलामाथि हुने सबैखाले उत्पीडनविरुद्ध आवाज बुलन्द पार्दै आएका छन्।
कोरोनाकालमा महिलामाथि थप हिंसा भएको पाइएको छ। विगतमा भएका उपलब्धिको संरक्षण गर्न पनि यो महामारीले कठिन पारिदिएको छ। कोरोनाकालमा महिला घरेलु काम बढी गरिरहेका छन् र यसको असर रोजगारी, शिक्षा र अन्य अवसरमा पर्न गएको छ।
महिला अधिकारकर्मीहरू पछिल्लो समयमा महिला अधिकारको अवस्था पहिलाभन्दा पनि खराब भएको बताउँछन्। हिंसक धम्की तथा कानुनी मामिलामा पाकिस्तानलगायतका कतिपय सहरमा विरोध प्रदर्शन हुन थालेका छन्। मेक्सिकोको हालत पनि महिलाको सन्दर्भमा खराब देखिएको छ।
पुरुष दिवस पनि मनाइन्छ?
निश्‍चित रूपमा पुरुष दिवस पनि मनाउने गरिन्छ। यसका निम्ति नोभेम्बर १९ तोकिएको छ। यसको सुरूआत भने १९९० को दशकपछि मात्रै भएको हो। संसारका ८० देशमा यो मनाइए पनि संयुक्त राष्ट्र संघले यसलाई मान्यता दिएको छैन।
पुरुष दिवसको आयोजना ‘पुरुषद्वारा दुनियाँ, आफ्नो परिवार तथा समुदायमा ल्याइएको सकारात्मक मूल्य’ का निम्ति गरिन्छ। पुरुषको सुखी र असल जिन्दगीको कामना गर्दै त्यसका निम्ति जागरुकता फैलाउने उद्देश्यमा यो दिवस मनाइन्छ। २०२० मा अन्तर्राष्ट्रिय पुरुष दिवसको नारा ‘पुरुष तथा किशोरका लागि स्तरीय स्वास्थ्य’ तय गरिएको थियो।
प्रकाशित: सोमबार, फागुन २४, २०७७ १३:००
महिला दिवसको बिऊ तब रोपियो, जब १९०८ मा न्युयोर्क सहरमा १५ हजार महिलाले कार्यघण्टा कम गर्ने तथा उचित तलब र मतदानको अधिकार माग्दै विरोध प्रदर्शन गरे।
संयुक्त राष्ट्रले १९९६ मा पहिलो पटक यसको आयोजना गर्दा नारा तय गर्‍यो- विगतको उत्सव मनाऊ, भविष्यको योजना बनाऊ।